Enina ambaratonga fanatsarana ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Alahady, Desambra 6, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Niasa mafy tao amin'ny indostrian'ny rindrambaiko an-tserasera nandritra ny folo taona lasa, heveriko fa tsy mahagaga raha maro ny olona no mitady ny torohevitro momba ny fampandrosoana sy fanatsarana ny sehatr'izy ireo - indrindra ny media sosialy. Nieritreritra betsaka momba izay mahatonga ny rindrambaiko havaozina ho an'ny media sosialy aho.
Syndication - ny ankamaroan'ny fampiharana dia manomboka ary mijanona miaraka amin'ity dingana ity. Mampiasa Twitter, Facebook, LinkedIn ary fampiharana hafa fotsiny izy ireo ho toy ny toerana hanerena ny hafatra any amin'ireo tambajotra tsirairay. Ity no farafaharatsiny farafaharatsiny fanatsarana ny haino aman-jery sosialy… fandefasana ny hafatrao ao anaty tambajotra misy anao, na aiza na aiza misy azy ireo. Tsy tena izy leverage media sosialy.
fanehoan-kevitra - Raha atosikao any amin'ny media sosialy ny hafatrao, ahoana ny fifandraisan'ny fampiharana na ny asa ataonao amin'ny fisian'io hafatra io? Mandrakitra valiny ve ianao, mamaly ny fanehoan-kevitra? Manitsy ny paikadinao mifanaraka amin'izany ve ianao? Ny resadresaka dia resadresaka fotsiny rehefa samy mihaino sy mifampiresaka.
Valisoa - Inona no valisoa amin'ny famaliana na fandraisana anjara? Raha tianao ny hananana fifandraisana an-kalitao maharitra hanararaotra tanteraka ny media sosialy, dia tokony hahazo valisoa ireo mpandray anjara. Tsy midika akory izany hoe tsy maintsy mandany vola ianao - mety hanome ny fanazavana angatahina fotsiny izany. Mety ho izany koa virtoaly credit amin'ny endrika rafitra teboka, lohateny, badge sns ... Raha tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny karama ny valisoanao dia tsy maintsy jerenao akaiky izany. Nijery ny fampiharana ara-tsosialy vitsivitsy nohavaozina aho ary miakatra avy hatrany rehefa tapaka ny rafitra valisoa na mijanona.
Analytics - Fotoana mety tsy hitanao io… fampiharana be loatra no miroboka ao anaty fampidirana haino aman-jery sosialy saingy manao tsirambina ny fandrefesana ny fiantraikan'izany fifandraisana izany. Ny habetsaky ny fifamoivoizana azon'ny orinasanao, ny vokatrao na ny serivisinao amin'ny alàlan'ny fanarahana ny natiora viralin'ny media sosialy dia goavana tokoa - saingy mila miantoka ny fandrefesanao azy tsara ianao mba hahafahanao mamaritra hoe ohatrinona ny loharanom-pahalalana hampiharina aminy.
lasibatra - ny fahaizana mikendry hafatra amin'ny prospect amin'ny haino aman-jery sosialy dia afaka manatsara ny fandraisana sy ny fampiasana ny rindranasao. Raha afaka mikendry ny fangatahanao amin'ny teny lakile, jeografia, fahalianana, fitondran-tena sns ianao, dia hanana fifandraisana lalina kokoa amin'ny mpihaino anao ianao.
Replication - Tsy tian'ny mpampiasa ny mandroso sy miverina eo anelanelan'ny fampiharana, koa ento aminy ny traikefan'ny mpampiasa. Raha ao amin'ny Facebook ny mpampiasa anao dia miezaha hitondra ny ankamaroan'ny zavatra ampiasain'ny mpampiasa anao misy dikany. Raha eo amin'ny tranokalanao ny resaka fa manomboka amin'ny Twitter dia avereno amin'ny tranokalanao ny Twitter. Izany no antony lehibe nilatsahako farany IntenseDebate ary naka an'i Echo avy amin'i JS-Kit. Ny JS-Kit dia mitondra fifanakalozan-kevitra amina fomba fampiharana haino aman-jery sosialy marobe ary mampifandray azy ireo mivantana Martech Zonerafitry ny fanehoan-kevitra.
Raha mitady hanitatra ny rindranasao na ny paikadinao amin'ny haino aman-jery sosialy ny orinasanao dia alao antoka fa hanana paikady feno ianao. Ny fanaparitahana ny hafatrao amin'ireo rindrambaiko haino aman-jery sosialy dia mety hisy fiatraikany kely - fa ny fanatsarana ny paikadinao dia mety hampiasa tanteraka ny heriny tsy mampino.
Farany, ny ezahinao atao dia ny Tadiavo ny herin'ny media sosialy amin'ny alàlan'ny fananganana tetezana misy programa na virtoaly eo anelanelan'ny orinasanao sy ny mpanelanelana. Vantany vao manamboatra an'io tetezana io ianao, dia mitandrema!
Dec 6, 2009 ao amin'ny 2: PM PM
Tsy maintsy mijery an'i Echo aho. Misaotra tamin'ny tolo-kevitra.
Dec 7, 2009 amin'ny 10: 05 AM
Misaotra noho ny fampahatsiahivana lehibe iray hafa fa miasa ny media sosialy. Be loatra ny mpivarotra mijery ny tambajotra sosialy ho toy ny paikady hahazoana fifamoivoizana bebe kokoa na SEO haingana… mila miasa sy fahaizana mihaino sy mianatra avy amin'ireo olona ifaneraseranao izany.
Dec 8, 2009 ao amin'ny 3: PM PM
Misaotra Steve! Manaiky anao 100% aho… ireo izay manararaotra ny haitao dia tsy mahatsapa ny valisoa feno.